Xirashada Soo-saareyaasha Soosaarayaasha - Shiinaha Xirashada Alaab-qeybiyeyaal & Warshad
Xakamaynta Caleenta Caleenta Dabiiciga ah ee Xayawaanka Dabiiciga ah
Waqtiga farxadda leh ee lagu cayaarayo banaanka xayawaannada, qaniinyada kaneecada ayaa badanaa burburiya jawiga. Haddii adiga iyo xayawaankaaga gurijoogta ah ay inta badan ku habsadaan dhibaatooyin noocan oo kale ah, markaa dawada cayayaanka naga celisa iyo qoorta kaneecada ayaa ah xulashadaada ugu fiican. Si wax ku ool ah u celiso kaneecada muddo dheer, adiga oo abuuraya jawi wanaagsan oo ammaan leh oo lagu ciyaaro adiga iyo xayawaankaaga.
Koodhka roogga eeyaha la qaadan karo, wuxuu leeyahay cabirro kala duwan oo noocyada eeyaha ah.Waxa lagu heli karaa 2 midab: Casaan, Buluug, maaddaduna waa mid deegaanka u roon oo si fudud loo nadiifin karo.Waxay ku habboon tahay eeyaha inay baxaan xitaa maalin roob leh. Naqshadayntu waa ka hortag wax ku ool ah eeyaha inay qoyaan oo ay hargab ku dhacaan.
Ey Koofiyad Dog Dog Boorsada Haandha laalaada Baagaga Double
Boorsada sariirta eeyaha ayaa ah aaladda darajada koowaad ee eey marka ay la safrayaan milkiilayaashooda.Jalaabadani waxay ka samaysan tahay shiraac neefsad leh oo aad u fudud, fudud oo la nadiifiyo oo ka caawisa eeygaaga inay yeeshaan heerkul joogto ah. markaad lugeyneyso kaamamka ama aad eeyga u socoto si culeyska u yareeyo, wuxuu kaloo sameeyaa muuqaal qurxoon.
Jaakada Jilicsan ee dharka Maduim Hooded Huged Pug Dharka Bulldogs
Astaamaha Sharaxa ee laga sameeyay alaab adkaysi leh, xirna u adkaysta oo bixiya jiilaal diiran oo aamin ah eeygaaga, Ka dhig qalalan maalmaha roobka kana ilaali xayawaankaaga roobka. sidoo kale. Naqshadaynta koofiyadda, waxay noqon kartaa mid aan biyuhu ka hor istaagi karin dhinacyada oo dhan, si aad eeyga ugu kaxaysan karto roobka. Waxaa jira xarigyo milicsi ah oo loogu talagalay inay u oggolaadaan eeyaha inay arkaan habeenkii si ay u ilaaliyaan nabadgelyadooda. Soocidda Midabka: Waxyaabaha Buluuga ah: Biya-buluug-iftiin badan oo polyeste ah ...
Dharka Halloween Dharka Duuliyeyaasha Koofiyadaha Koofiyad Samee Dog Cosplay
Astaamaha Sharaxa 1. Dharkaan eeygu wuxuu ka samaysan yahay polyester tayo wanaagsan iyo dhogorta maqaarka, waa jilicsan, khafiif ah, dib loo isticmaali karo, maqaarka u roon, oo siinaya xayawaankaaga waayo-aragnimo raaxo leh 2. Dharka xayawaanka la dhigay waxaa ka mid ah garbasaar casaan ah iyo koofiyad leh muraayado, qaab qabow si aad xayawaankaaga xayawaankaaga ah ugu ekaatid moodada oo xitaa aad moodid xiddig filim ah, Qalabka dhogorta ee Polar ah xayawaannadaada ha kululaado xitaa xilliga qaboobaha. 3.Quruxda yar yar ee dharka Halloween waxay ku habboon tahay Halloween, xafladaha dhalashada, sawir qaadista iyo wixii la mid ah, i ...
Dharka Dog Halloween Dharka Libaaxa Mane Wig Qalabka Eeyaha Weyn
Astaamaha Sharaxaadda Wig libaax man wig wuxuu leeyahay 2 dhegood, taas oo ka dhigi karta eygaaga xayawaanka ah inuu u ekaado sida libaax oo kale markuu xidhayo, kuna habboon ciidaha, xafladaha ama ciidaha. Munaasabad munaasib ah ayaa loo adeegsadaa xafladaha Halloween, hadiyadaha kirismaska, iwm. Ka samaysan dhogorta iyo boodhka macmalka ah ee dibedda ah, taabasho jilicsan oo raaxo leh. Iyada oo leh xarig laastik ah oo la hagaajin karo, oo ku habboon qurxinta eeyaha! Way fududahay in la xidho sidoo kale! Tilmaamaha Midabka: Waxyaalaha buniga ah: Fur + Cabbirka Polyester: 40cm ee kootada ...
Pet Neckerchief Qalabka Scarf Dog Kerchief Tartan Dog Bandana
Astaamaha Sharaxaadda Daabac tartan oo waxay ka sameysan tahay dhar dhogor weyn leh. Wanaagsan dhamaan noocyada munaasabadaha .Qurbahayagu qurxoon had iyo jeer waa wax lagu garaaco dhacdooyinka gaarka ah, bandhigyada eyga ama xitaa aroosyada. Hal shay waa hubaal, eeygaaga ayaa madaxa u rogi doona meel kasta oo uu tago ama aada! Ku habboon dhammaan noocyada yar yar ama yar ee yar. Tilmaamaha Midabka: Casaanka Tartan + Waxyaabaha Tartan Buluug ah: Dharka Dharka Miisaanka Badeecada: 60g / 0.13lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonaa inaan cusbooneysiino badeecadeena xilliyada qaar si ...
Dabeecadda xayawaanka 'Elizabeth Collar' Madaxa Koriinka Kaabashada ECollar
Astaamaha Faahfaahinta 1.Kaanku wuxuu ka samaysan yahay caag adag, waara oo ka hortagga, cirifka waxaa laga sameeyaa maqaar jilicsan, si loogu helo raaxo iyo badbaado dheeraad ah. ilaa xayawaankaaga. 3. Dhinac maqaar suuf ah oo bixiya waayo-aragnimo xirasho raaxo leh ee xayawaankaaga, midab hufan ayaa kaa caawinaya inaad si fudud ugu aragto xayawaankaaga xayawaanka. 4. Hab badbaado leh oo wanaagsan oo looga hortago xayawaannada inay uga sii daraan wou bogsiinaya ...
Dharka Xayawaanka Shark Dharka Halloween Dharka Eeyaha Dharka Eeyaha
Astaamaha Sharaxaad leh Dharkaan eey shark xitaa saaxiibkaa afarta lugood leh ayaa ku raaxeysan doona Halloween! Maaha oo kaliya milkiilayaasha eeyga inay rabaan inay u labistaan ​​Halloween! Halkan waxaa imanaya dharka loo yaqaan 'shark' oo loogu talagalay saaxiibkaa lug-goobeedka ah! Dharkaan xayawaanka duurjoogta ah eeygaaga ayaa noqon doona xiddigta xayawaan kasta oo Halloween ah! Dharka waxaa laga sameeyaa jilicsan jilicsan oo leh naqshado xargo sixir lagu hagaajin karo. Ku habboon eeyaha yaryar ama kuwa dhexdhexaadka ah. Tilmaamaha Midabka: Waxyaabaha Buluuga ah: Miisaanka alaabta loogu talagalay: 250g / 0.55lb 1. In a ...
Dog Unicorn Dharka Xisbiga Cape Puppy Fancy Outfit Cosplay
Astaamaha Sharaxaadda Dabooliddu way fududahay in la xidho oo la iska bixiyo. Qalabka Polyester waa mid aad u fudud, jilicsan, raaxo leh oo neefsan kara. La jaan qaadi kara eeyaha lab iyo dhaddig, bisad iyo xayawaan kale. Naqshadeynta unicorn quruxsan ayaa xayawaankaaga yaryar u muuqataa mid qurxoon oo qurux badan. Tilmaamaha Midabka: Waxyaabaha Casaanka ah: Waxyaabaha PU & Polyester Size: S size eeyaha yaryar & bisadaha / L cabirka eeyaha dhexdhexaadka ah Miisaanka alaabada: 200g / 0.44lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonaa inaan cusbooneysiino badeecadeena si xilliyeed ah si aan ...
Koofiyad Dhalasho Ey Koofiyad Dabbaaldeg ah Qalabka Agabka Xisbiga
Tilmaamaha Tilmaanta Tani dhalashadeeda dhalasho waxay leedahay midabbo dhalaalaya oo dhalaalaya iyo naqshad gaar ah, qurux badan, qurux badan oo macaan. Ka caawi inaad soo jiidato fiiro gaar ah oo aad ku guuleysato ammaan badan. Eygaaga ka dhig mid dhalaalaya xafladda dhalashada. Tilmaamaha Midabka: Tiffany Buluug & Dahabi Waxyaabaha: PU Cabbirka maqaarka: S cabirka eeyaha yaryar / M cabirka eeyaha dhexdhexaadka ah / L cabirka eeyaha waaweyn miisaanka alaabta: 80g / 0.17lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonaa inaan cusbooneysiino alaabteena xilliyo inaad sii wado inaad fiiro gaar ah u yeelatid ...
Boorsada Eyga Ey Eyga Lahaanshaha Dhabarka Leash Cute Animal Saddlebag
Astaamaha Sharaxa 1. Suuf jilicsan oo tayo sare leh oo mesh mesh gudaha leh ayaa siinaya haynta wanaagsan ee xayawaankaaga aad jeceshahay si loo hubiyo in eygaagu u noqon doono mid ammaan ah oo raaxo leh. 2. Dabeecad jilicsan oo daanyeer ah oo naqshadeysan, waxay kaliya ka dhigtaa eeygaaga cuncun gooye ah marka eeygaagu sido. 3. Way qaadi kartaa cuntada, dhalooyinka biyaha, boorsada saxarada, alaabta carruurtu ku ciyaarto, gargaarka degdegga ah, ama sahayda kale ee maalinlaha ah. Noqo mid si fudud u fududaan kara, oo ku habboon ilaa 2kg miisaanka. 4. Xabadka si buuxda loo hagaajin karo iyo xarkaha dhinacyada waxay u oggolaanayaan taam loo habeyn karo oo ku habboon y ...